ဒီနှစ်ထဲ ဘဏ်မှာ သိန်းပေါင်း(၁၅၀၀)ကျော်ထည့်နိုင်ခဲ့လို့ စားချင်တာစားပြီး ဝယ်ချင်တာတွေ အကုန်ဝယ်မယ်ဆိုပြီး အရမ်းပျော်နေတဲ့ နေဒွေး – Suehninsi
မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကျော် ဂျစ်တူးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသားနေဒွေးကတော့ ယောကျာ်းပီးသတဲ့​ဘော်ဒီဘော်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေခေတ်ထဲက ရေပန်းစားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးပါ။ ရရင်ရသလိုပရဟိတတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့
​မင်းသားနေဒွေးကတော့ ဒီနေ့မှာ ”2020 နှစ်ကုန်ခါနီးပြီ.. ဒီနှစ်ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့…မြေကွက်၂ကွက် ဝယ်နိုင်ခဲ့တယ် ..ကိုယ့်နာမည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကလည်း အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ တစ်လကို အနည်းဆုံး သိန်း ၅၀ မကဘူး ရခဲ့တယ်။အရောင်းဝယ်ကလည်း ထင်တာထက်အလုပ်ဖြစ်တယ်။စားချင်တာတွေလည်း အကြိမ်ကြိမ် ရှယ်စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဝယ်ထားတဲ့
မြေကွက်လေးကလည်း၅ဆလောက် မြတ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တော့စီးနေတဲ့ကားစုတ်လေးကိုကောင်းတဲ့မြင့်တဲ့အသစ်နဲ့ လဲနိုင်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကလဲပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်။အလုပ်ကိုလည်းပိုမို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဘဏ်မှာလည်း ငွေ သိန်း ၁၅၀၀ကျော်ထည့်နိုင်ခဲ့တယ် ။ခုဆို ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကမိသားစုနဲ့
အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ ရပြီ ။ဒီနှစ်ထဲ စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ထားတာကလည်းပျမ်းမျှတစ်လ သိန်းဆယ်ကျော်မကရအုံးမှာဆိုတော့ အေးဆေးဖြစ်နေပါပြီ ။နှစ်သစ်မှာ သွားချင်တဲ့ ခရီးတွေ ထွက်မယ် …စားချင်တာတွေ စားမယ်… ဝယ်ချင်သမျှ အကုန်ဝယ်မယ်…အမှန်တော့ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ ပြောနေတာပါအထင်မကြီးနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တာ….( လက်တွေ့လဲဖြစ်နိုင်တယ်နော် )။မိတ်ဆွ ကျတော့်အပေါ် သဘောထားလေးစီစစ်လို့ ရအောင်လို့ပါ…..တကယ်ကတော့ စာဖတ်ရင်း
ဝမ်းသာ အားကျ နေရင်တော့ သင်ဟာ ကျတော့်အပေါ် မုဒိတာစိတ်ရှိလို့ပါ စာဖတ်ရင်း တစုံတစ်ရာစိတ် ဖြစ်နေရင်တော့သင်ဟာ ကျတော့်အပေါ် တစုံတစ်ရာမူမမှန်စိတ် ရှိလို့ပါ 🙄စာဖတ်ရင်း ရီချင်နေရင်တော့သင်ဟာ ကျတော့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသူပါ 😃ဖတ်နေရင်း ကိုယ်တိုင်ထပ်တူပျော်နေရင်တော့ သင်ဟာ စိတ်ကောင်းရှိသူပါ….😊😊😊အသက်ရှည်ဆေးပါ…”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို စနောက်အရွှန်းဖောက်ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့အသညျးကြျော ဂဈြတူးလို့ ချေါကွတဲ့ မငျးသားနဒှေေးကတော့ ယောကျြားပီးသတဲ့ဘျောဒီဘျောဒီကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတဈယောကျပါ။ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှခေတျေထဲက ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့မငျးသားတဈလကျဖွဈပွီး ကရြာဇာတျရုပျကို သရုပျဆောငျနိုငျသူတဈဦးပါ။ ရရငျရသလိုပရဟိတတှကေိုလုပျဆောငျနတေဲ့
မငျးသားနဒှေေးကတော့ ဒီနမှေ့ာ ”2020 နှဈကုနျခါနီးပွီ.. ဒီနှဈဘာတှလေုပျပွီးပွီလဲ ပွနျဆနျးစဈကွညျ့လိုကျတော့…မွကှေကျ၂ကှကျ ဝယျနိုငျခဲ့တယျ ..ကိုယျ့နာမညျနဲ့လုပျထားတဲ့လုပျငနျးကလညျး အရမျးအဆငျပွတေယျ။ တဈလကို အနညျးဆုံး သိနျး ၅၀ မကဘူး ရခဲ့တယျ။အရောငျးဝယျကလညျး ထငျတာထကျအလုပျဖွဈတယျ။စားခငျြတာတှလေညျး အကွိမျကွိမျ ရှယျစားဖွဈခဲ့တယျ။ဝယျထားတဲ့
မွကှေကျလေးကလညျး၅ဆလောကျ မွတျခဲ့တာတှေ ရှိခဲ့တော့စီးနတေဲ့ကားစုတျလေးကိုကောငျးတဲ့မွငျ့တဲ့အသဈနဲ့ လဲနိုငျခဲ့တယျ။ လကျရှိလုပျနတေဲ့လုပျငနျးကလဲပိုပွီးအဆငျပွလောတယျ။အလုပျကိုလညျးပိုမို ကောငျးမှနျအောငျ လုပျနိုငျခဲ့တယျ။ဘဏျမှာလညျး ငှေ သိနျး ၁၅၀၀ကြျောထညျ့နိုငျခဲ့တယျ ။ခုဆို ပိုငျဆိုငျသမြှတှကေမိသားစုနဲ့
အေးအေးဆေးဆေးနလေို့ ရပွီ ။ဒီနှဈထဲ စပျတူရှယျယာ လုပျထားတာကလညျးပမျြးမြှတဈလ သိနျးဆယျကြျောမကရအုံးမှာဆိုတော့ အေးဆေးဖွဈနပေါပွီ ။နှဈသဈမှာ သှားခငျြတဲ့ ခရီးတှေ ထှကျမယျ …စားခငျြတာတှေ စားမယျ… ဝယျခငျြသမြှ အကုနျဝယျမယျ…အမှနျတော့ ဖွဈခငျြခဲ့တာ ပွောနတောပါအထငျမကွီးနဲ့ စိတျကူးယဉျတာ….( လကျတှလေဲ့ဖွဈနိုငျတယျနျော )။မိတျဆှ ကတြေျာ့အပျေါ သဘောထားလေးစီစဈလို့ ရအောငျလို့ပါ…..တကယျကတော့ စာဖတျရငျး
ဝမျးသာ အားကြ နရေငျတော့ သငျဟာ ကတြေျာ့အပျေါ မုဒိတာစိတျရှိလို့ပါ စာဖတျရငျး တစုံတဈရာစိတျ ဖွဈနရေငျတော့သငျဟာ ကတြေျာ့အပျေါ တစုံတဈရာမူမမှနျစိတျ ရှိလို့ပါ 🙄စာဖတျရငျး ရီခငျြနရေငျတော့သငျဟာ ကတြေျာ့အကွောငျးကောငျးကောငျးသိသူပါ 😃ဖတျနရေငျး ကိုယျတိုငျထပျတူပြျောနရေငျတော့ သငျဟာ စိတျကောငျးရှိသူပါ….😊😊😊အသကျရှညျဆေးပါ…”ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေို စနောကျအရှနျးဖောကျခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။